कसरी बाहिरियो शालिकरामको भिडियो? भिडियो बाहिर निकाल्ने ब्याक्तिले दिए यस्तो प्रतिक्रिया ! – Etajakhabar
‘कसैले गाली गरेको वा पि९टेकै भरमा घ९ टना हुन थाल्यो र त्यसमा यो दफा लागू गर्न थाल्यो भने त्यसले समाजलाई अर्कैतिर लैजाला। कसैले बारम्बार यातना दिइरहेको छ र उसले कुनै विकल्प देख्दैन र मृ९ त्युको बाटो रोज्छ भने यस्तो परिस्थितिमा यो दफाको परिकल्पना गरिएको होला। यसको आशय कसैले पनि मर्न बाध्य बनाउनु हुन्न र त्यस्तो भयो भने सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो’, पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्। यो दफाको कार्यन्वयन पक्ष विवादरहित नहुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
Posted on: Monday, August 19, 2019 Time: 9:56:33
-19146 second ago
-18013 second ago
-14451 second ago
-13369 second ago
-8723 second ago
-7434 second ago